နီကယ်သတ္တုစပ်, ကိုဘော့အလွိုင်း, တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ပေးသွင်း - Sekonic Metals နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ဘား & ချောင်းတွေ
စာရွက် & ပြား
strips & တိပ်
ဝါယာကြိုး & mesh
Hastelloy B ကို
Hastelloy X ကို
soft Magentic သတ္တုစပ်
တိုက်တေနီယမ်သတ္တု & မြှောင်
တိုက်တေနီယမ် Bolt က & ဝက်အူ
Inconel-Incoloy-Monel-Hastelloy-ဖျသံလိုက်အလွိုင်း-ဘော့သတ္တုစပ်များကို-Permalloy သတ္တုစပ်များကို * တိုက်တေနီယမ်ထုတ်ကုန်!
အရည်အသွေးမြင့်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး နီကယ်အခြေပြုသတ္တုစပ် , တိုက်တေနီယမ်သတ္တုစပ်များကို & ဘော့အခြေပြုသတ္တုစပ် နှင့်အခြားအထူး မြင့်မားသောအပူချိန် နှင့် တိုက်စားမှုများကိုခုခံသတ္တုစပ်များကို ရရှိနိုင်ပါ in Various Kinds of Forms, Application For Many Fields ! Lear Us More
---- ပိုက် Fittings ---- နီကယ်သတ္တုစပ် Tube နှင့်ပိုက် Fittings
---- စာရွက် & ပြား ---- ဟော့ Rolling နှင့်အေး Rolling စာရွက်
--- ပိုက် & Tube --- ချောမွေ့စွာ Tube, ဂဟေဆော်ခြင်း Tube, ဦး-ကွေး-Tube
--- မြှောင် & တိပ် --- နီကယ်အခြေပြုအလွိုင်း Strip
------- အနားကွပ် ------ Monel အနားကွပ်, Hastelloy နှင့် Incoloy အနားကွပ်
- သံမဏိ Mesh- Incoloy နှင့် Inconel အလွိုင်းဝါယာကြိုးကွက်
--Bar & Rods-- သံမဏိ, နီကယ် & ဘော့သတ္တုစပ်များကိုဘား
----- Tube စာရွက် ----- အမြင့်အပူချိန်အလွိုင်း Tube စာရွက်
အမြင့် Temp နွေ Inconel X750 နွေ, Inconel 725 နွေဦးရာသီ, Inconel 625 Springs
------ စွဲစေ ------ အမြင့်အပူချိန်အလွိုင်း Bolt က, အခွံမာသီး, ဝက်အူ, ဦး-Bolt
--Wires & ဂဟေဆော်ခြင်း Wire- ဖြတ်အရှည်ဝါယာကြိုး, coil ဝါယာကြိုး, ဂဟေဆော်ခြင်းကြေးနန်းနီကယ်အလွိုင်းဘား, ကိုဘော့သတ္တုစပ်များကိုဘား
-Soft သံလိုက် Parts- Permalloy Core နှင့် Fittings
အထူးသတ္တုစပ်များကိုတရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်း 10 ဦးပေးသွင်း, ပုံစံမရရှိနိုင်ပါစေနိုင်ပါတယ် ဘား, ပိုက်, ကြေးနန်း, စာရွက်, အနားကွပ်, မြှောင်, ကွက် , နွေဦး, tube စာရွက်, စွဲစေ , နှင့်အခြား Fittings ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရရှိရန်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ!
Sekonic Metals နည်းပညာ Co. , Ltd မှ -ISO 9001 အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အထူးပြုစက်ရုံ အမြင့်အပူချိန်သတ္တုစပ် များနှင့် တစ်ဦး nti-ချေးသတ္တုစပ်များကို ကဲ့သို့သော Hastelloy သတ္တုစပ် ,
E-mail ကို: sekonicmetals@gmail.com
ကျွန်ုပ်တို့၏ Key ကို Maket
Sekoinc Metals သငျသညျအမြင့်အပူချိန်နှင့်စသည်တို့ကိုဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ, အာကာသ, ရေနံဓာတုနျူကလီးယား, သမုဒ္ဒရာစက်မှုလုပ်ငန်း, ဓာတုဗေဒ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အဘို့တိုက်စားမှုများကိုခုခံသတ္တုစပ်များကိုကျယ်ပြန့်လျှောက်လွှာပေး
သင်္ဘော & Marin စက်မှုလုပ်ငန်း
အိုအယ်လ်အီးဒီမျက်နှာဖုံး Frame ကအတွက်အသုံးပြု Invar ပြား
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ INVAR OLED မျက်နှာဖုံး Frame က IINVAR လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုအလွိုင်းတစ်ခုအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်ကြောင့် 1896 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်၏ Guillanume အားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်အတှကျအသုံးပွု Clients များအတွက် Invar ပန်းကန်ထုတ်လုပ် ....
ပြီးခဲ့သည့်2လကြာ, ငါ့ပေးသွင်းအများစုငါ့ကို၎င်းတို့၏ကုန်ကြမ်းများ၏စျေးနှုန်းများကို (8% -19% အထိ) ကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းအသိပေးအီးမေးလ်များကိုစေလွှတ်ပြီ, ဒါသူတို့ဎရှိတယ် ...
UMCO50 ပစ္စည်းမြင့်မားသောအပူချိန်အတွက်အသုံးပြု ...
Umco50 ပစ္စည်းအကြောင်းကို 900 1150 မှကို C အပူချိန်မှာမီးဖိုခြေလှမ်းအတွက် Re-အပူအဘို့ကိုအသုံးပြုပါ။ နီကယ်နှင့် Tugstern ခမရှိဘဲပုံမှန် UmCo50 ဓာတုဆွေး ( ...
နီကယ်သတ္တုစပ်ဂဟေဝါယာကြိုးဓာတု compos ...